KNU နှင့်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၅ ဦးသေ.... - Sainpwar
ပုလဲမြို့နယ်အတွင်း ဝင်လာသည့် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်း အစီး ၈၀ ကျော်ကို မိုင်း ၂၇ လုံးခွဲ၍ PDFတိုက်ခိုက်
သိန်း၂၅၀၀ ကျော်ကို နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အလှူငွေတွေ ထပ်မှန်ရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပန်ဆယ်လို
[ October 23, 2021 ] စစ်ကိုင်းတိုင်းကို စကစ မနိုင်တာလဲမပြောနဲ့ မိန်းခလေးတွေကအစ တော်လှန်းရေးစိတ်ဓာတ်က လေးစားစရာ	KNOWLEDGE
[ October 23, 2021 ] သူချက်တဲ့ ဟင်းလျာတိုင်းကို မြိန်ရေယှက်ရည်စားသောက်နေကြတဲ့ PDF ရဲဘော်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုပေါက်	CELEBRITY
[ October 23, 2021 ] မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် …	KNOWLEDGE
[ October 23, 2021 ] ရွှေကျင်မြို့က တောင်သူများကို နေကြာစိုက်ရန် စစ်ကောင်စီ ဖိအား​ပေး….	LOCAL NEWS
[ October 23, 2021 ] ပဲခူးမြို့ မြွေဘုရားက မြွေမယ်တော်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့မြွေကြီး စောနန်းဝေ ဆုံးသွားပါပြီ….	KNOWLEDGE
HomeUncategorizedKNU နှင့်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၅ ဦးသေ….
KNU နှင့်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၅ ဦးသေ….
September 25, 2021 admin Uncategorized 0
KNU နှင့်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၅ ဦးသေ၊ စစ်ကောင်စီတပ် အချင်းချင်း မှားယွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ စက်တင်ဘာ၂၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ ၂၅ ဦးသေဆုံးပြီး စစ်ကောင်စီတပ်အချင်းချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
KNU သထုံခရိုင် တပ်မဟာ(၁) ၏ ဒေသခံတပ်ဖွဲ့များနှင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ သိမ်ဇရပ်ကားလမ်းမပေါ်တွင် ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီဘက်က ၂၅ ဦးသေဆုံးပြီး ငါးဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ KNU ဘက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲအပြီး စစ်ကောင်စီဘက်သို့ စစ်ကူလာသည့် တပ် အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနီးရှိ ပြည်သူ သုံးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ပြည်သူလူထုပိုင် ကားတစ်စီးမှာလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့‌ကြောင်း KNU က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ တပ်မဟာ (၃) ဘက်တွင်လည်း စစ်ကောင်စီနှင့် KNLA တို့ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲ ကိုး ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
KNU တပ်မဟာ (၃) တပ်ဖွဲ့များနေထိုင်ရာ မြေနီကုန်းနှင့် ဘုရားလေးကုန်း စသည့်နေရာများကို စစ်ကောင်စီကသိမ်းယူရန် ချီတက်လာခြင်းကြောင့် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များ ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများသဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် တပ်တစ်ဝက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် တပ်အားလုံးပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်း KNU က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် စစ်ကောင်စီတပ်သားများ၏ အလောင်းများကို KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မြုပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲ သုံးရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် လော်မူသော၊ လော်မူပယ် ရွာမှ ဒေသခံ ၆၆၇ ယောက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရကြောင်း KNU ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
KNU နှငျ့ဖွစျပှားသညျ့ တိုကျပှဲတှငျ စစျကောငျစီတပျသား ၂၅ ဦးသေ၊ စစျကောငျစီတပျ အခငြျးခငြျး မှားယှငျး ပစျခတျမှုဖွစျပှား
ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (KNU)နှငျ့ အကွမျးဖကျစစျကောငျစီတပျတို့ စကျတငျဘာ၂၂ ရကျက ဖွစျပှားခဲ့သညျ့ တိုကျပှဲတှငျ စစျကောငျစီတပျဘကျမှ ၂၅ ဦးသဆေုံးပွီး စစျကောငျစီတပျအခငြျးခငြျး မှားယှငျးပစျခတျမှုလညျး ဖွစျပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
KNU သထုံခရိုငျ တပျမဟာ(၁) ၏ ဒသေခံတပျဖှဲ့မြားနှငျ့ အာဏာသိမျးစစျကောငျစီတပျတို့ သိမျဇရပျကားလမျးမပေါျတှငျ ထိတှေ့တိုကျပှဲဖွစျပှားခဲ့ရာ စစျကောငျစီဘကျက ၂၅ ဦးသဆေုံးပွီး ငါးဦး ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့ခွငျးဖွစျကာ KNU ဘကျက ထိခိုကျကဆြုံးမှုမရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါတိုကျပှဲအပွီး စစျကောငျစီဘကျသို့ စစျကူလာသညျ့ တပျ အခငြျးခငြျးမှားယှငျးပစျခတျမှုဖွစျပှားခဲ့ပွီး အနီးရှိ ပွညျသူ သုံးဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိကာ ပွညျသူလူထုပိုငျ ကားတစျစီးမှာလညျး ထိခိုကျပကြျစီးခဲ့‌ကွောငျး KNU က ထုတျပွနျထားသညျ။
အလားတူ တပျမဟာ (၃) ဘကျတှငျလညျး စစျကောငျစီနှငျ့ KNLA တို့ စကျတငျဘာ ၂၂ ရကျမှ ၂၄ ရကျအတှငျး တိုကျပှဲ ကိုး ကွိမျဖွစျပှားခဲ့သညျ။
KNU တပျမဟာ (၃) တပျဖှဲ့မြားနထေိုငျရာ မွနေီကုနျးနှငျ့ ဘုရားလေးကုနျး စသညျ့နရောမြားကို စစျကောငျစီကသိမျးယူရနျ ခြီတကျလာခွငျးကွောငျ့ KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ တိုကျပှဲဖွစျပှားရခွငျးဖွစျသညျဟု သိရသညျ။
တိုကျပှဲအတှငျး စစျကောငျစီတပျမြား ဘကျမှ ထိခိုကျကဆြုံးမှုမြားသဖွငျ့ စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျတှငျ တပျတစျဝကျပွနျဆုတျခဲ့ပွီး စကျတငျဘာ ၂၅ ရကျတှငျ တပျအားလုံးပွနျဆုတျသှားခဲ့ကွောငျး KNU က ထုတျပွနျထားသညျ။
တိုကျပှဲအတှငျး ကဆြုံးခဲ့သညျ့ စစျကောငျစီတပျသားမြား၏ အလောငျးမြားကို KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြားက မွုပျနှံပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
တိုကျပှဲ သုံးရကျဆကျတိုကျဖွစျပှားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ လောျမူသော၊ လောျမူပယျ ရှာမှ ဒသေခံ ၆၆၇ ယောကျ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ နရေကွောငျး KNU ၏ ထုတျပွနျခကြျတှငျ ဖောျပွထားသညျ။
လက်ထဲသေနတ်ရောက်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ ဖြုတ်နည်းတပ်နည်း အသုံးပြုနည်းကို ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ကိုလေးစားသောအားဖြင့် ဗိုလ်ချူပ် တပ်ခေါ်ရန်….
စစ်ကိုင်းတိုင်းကို စကစ မနိုင်တာလဲမပြောနဲ့ မိန်းခလေးတွေကအစ တော်လှန်းရေးစိတ်ဓာတ်က လေးစားစရာ
သူချက်တဲ့ ဟင်းလျာတိုင်းကို မြိန်ရေယှက်ရည်စားသောက်နေကြတဲ့ PDF ရဲဘော်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုပေါက်
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် …
ရွှေကျင်မြို့က တောင်သူများကို နေကြာစိုက်ရန် စစ်ကောင်စီ ဖိအား​ပေး….
ပဲခူးမြို့ မြွေဘုရားက မြွေမယ်တော်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့မြွေကြီး စောနန်းဝေ ဆုံးသွားပါပြီ….